विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेकी शिक्षिका कमला घर पुग्न पाईनन् ! – News543Online
June 14, 2021 adminLeaveaComment on विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेकी शिक्षिका कमला घर पुग्न पाईनन् !
बागलुङ, २० जेठ– ट्रयाक्टरको ठक्करबाट शनिबार बिहान यहा“की एक महिला शिक्षकको मृ’त्यु भएको छ । बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ६ लहरेपिपलमा ग १ त ६३०३ नम्बरको ट्रयाक्टरले ठ’क्क’र दिंदा स्थानीय काफलडा“डा आधारभूत बिद्यालयकी शिक्षक ४० बर्षिय कमला शर्माको मृ’त्यु भएको हो ।
ठ’क्क’र दिएलगत्तै कालोपत्रे सडकमा ठो’कि’एकी ती मलिाको घ’ट’नास्थलमै मृ’त्यु भएको थियो । विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा बिपरित दिशाबाट आएको ट्रयाक्टरले उनलाई ठ’क्क’र दिएको प्रहरी नायव उरिक्षक इकवाल हवारीले बताए । ठ’क्क’र दिने ट्रया’क्टर र चालकलाई प्रहरीले नि’य’न्त्र’ण’मा लिएर अ’नु’स’न्धान थालेको उनले जानकारी दिए ।
वडा अध्यक्ष खिमराज सापकोटाका अनुसार, उक्त ट्रयाक्टर सहचालकले चलाएको र ला’प’र’बा’हीले घ’ट’ना भएको थियो । घ’ट’नामा मृ’त’क शिक्षकका श्रीमान, २ छोरी र १ छोरा छन् । ला’पर’वा’हीले घ’ट’ना भएपछि आ’क्रो’सि’त स्थानीयले श’व उठाउन पनि दिएका छैनन् । आ’क्रो’सि’त भी’डलाई साम्य पारेर पो’ष्र्ट’मा’र्ट’म गराउने तयारी गरेको हवारीले बताए ।
बैकल्पिक सरकारका लागि गण्डकी प्रदेश प्रमुख सिता कुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम आह्वान गरेपछि विपक्षी ग’ठब’न्धन आजै बहुमत दा’वी गर्न जाने भएको छ । विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै साँझ ५ बजे प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित हुन लागेको हो ।
विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित ३१ जना छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चाले कृष्ण थापालाई का’र’वा’ही गरेपछि उनी आजै दोस्रो पटक प’द’मु’क्त भएपछि प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय भएको छ ।
असार २ गते देखि विद्यालय खोल्न मन्त्रालय द्वारा सम्पूर्ण पब्लिक लाई निर्देशन